Notazomin'i Allemàna ny lalàna momba ny fahaleovantenan'i Litoania: Namaly i Lithuania tamin'ny famoronana endritsoratra manokana
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Notazomin'i Allemàna ny lalàna momba ny fahaleovantenan'i Litoania: Namaly i Lithuania tamin'ny famoronana endritsoratra manokana
Taona iray manan-danja ho an'i Litoania i 2018 - 100 taona lasa izay, tamin'ny 16 Febroary, namerina ny fahaleovan-tenany ny firenena bitika kely. Ny Act of Reinstating Independence of Lithuania dia nosoniavin'ny olona roapolo ary noho izany dia namorona fanjakana maoderina. Mampalahelo fa tao anatin'ny korontana vokatry ny ady sy ny fanjakan'ny sovietika dia very ny lalàna momba ny fahaleovantena - ary vao tsy ela akory izay no hita tao amin'ny arisivan'ny Alemanina. Na izany aza, na dia nampindramin'i Alemana ny lalàna ho an'ny fankalazana ny faha-zato taona dia any Alemana izao.
Mba hamahana ity toe-javatra ity ary hamerenana ny lalàna amin'ny vahoaka litoanianina, dia namorona ny endritsoratra nampiasaina tao amin'ny lalàna famerenana ny fahaleovan-tena tany am-boalohany ny studio famoronana iray antsoina hoe FOLK. Ny endritsoratra dia antsoina hoe Signato, ary mpamorona endritsoratra matihanina, Eimantas Paskonis no namorona. Naharitra efa-bolana izy vao namorona, namerina nanoratra ny tarehin-tsoratra rehetra tamin'ny marimarina, ary koa mila miresaka boky fanampiny nosoratan'i Jurgis Šaulys, ilay lehilahy nanoratra ny lalànan'ny lalàna momba ny famerenana ny fahaleovan-tena, hamerina ireo litera tsy hita.
Ny fanamby lehibe, hoy ny mpamorona, dia ny fampitana ny endrik'ilay sora-tanana amin'ny ankapobeny, satria manelingelina ny fisoratana an-tsoratra an-tsoratra, ary misy litera sasany soratana sy atambatra amin'ny fomba maro. Mamorona fiovana maromaro ho an'ny litera sy tarehimarika, mariky ny 450 no noforonina, mba hahafahan'ny solosaina maka tahaka azy toy ny hoe nanoratra typeface iray ny olona iray. Signato dia mampiasa abidia latina, alemanina ary litoanianina.
Ny masoivoho famolavolana FOLK, ireo mpamorona ny endrika nasionaly Litoanianina 'Signato,' dia tototry ny fahalianana hanandrana ny endritsoratra vaovaon'ny firenena. Ny endri-tsoratra dia nanoratra ny sora-tànan'ny Fanambarana fahaleovantena tamin'ny 1918, izay fananan'i Alemana hatrany.
'Signato' dia natolotra ny praiminisitra tamin'ny 14 feb - andro vitsivitsy talohan'ny fetim-panjakana tamin'ny 16 feb. Avy eo ny olona dia nasaina nanao sonia ny Rea fanamafisana ny lalàm-pahaleovan-tena, nahitana fametrahana 67,000 tamin'ny 4 andro voalohany sy sonia 36,500 tamin'ny herinandro voalohan'ny fanombohana.
Naseho tamin'ny endri-javatra maro ny endritsoratra, anisan'izany ny foara famakiana boky lehibe indrindra any amin'ny Faritra Baltic, Vilnius Book Fair, izay nanasonian'ny filoham-pirenenan'i Litoania Dalia Grybauskaite ny lalàna momba ny fanamafisana ny fahaleovantena miaraka amin'ireo foara hafa, izay niandry nandritra ny ora maro hahazoana ny sonian'izy ireo na hafatra manokana ho an'i Lituania nosoratan'i robot-hand.
Ny masoivohon'ny famolavolana FOLK dia nitatitra fa ny famoahana endri-tsoratra dia nahitana valiny tsara. Ny zokiolona dia voalaza fa mangataka ny zafikeliny hanampy azy ireo hametraka endritsoratra, nilaza ny ankizy fa ny mpampianatra dia mampiseho ny endritsoratra ho anisan'ny fandaharam-pianarana any an-tsekoly, ary ny taratasy voasoratra ao amin'ny 'Signato' dia miraraka miaraka amin'ireo hafatra mahafinaritra erak'izao tontolo izao.
Ireo mpandahatra fandaharana amin'ny dinika indostrialy famolavolana manokana dia nanandrana nanaparitaka ny endritsoratra, namakafaka ny fomba nandrafetana azy. Ny masoivoho koa dia tototry ny tolo-kevitra ara-barotra - manomboka amin'ny rojo vy ka hatramin'ny akanjo.
Amin'ny ankapobeny, ny litera litoanianina 'Signato' dia naneho ny fomba fampiasana ny hevitra famolavolana tany am-boalohany ho fitaovana fifandraisana izay mamoaka ny avonavona amin'ny lova nasionaly. Tian'ireo mpamorona ny zava-misy fa ny tetik'asa famolavolana fatra-paniry laza dia tsy nijanona tao amin'ny 'bubble d'industrie' fa tonga ary niresaka tamin'ny olona tany amin'ireo tanàna kely indrindra any Litoania, ary koa tany ivelany.
Inona ny tohin'i Signato? Ny sonia rehetra izay nangonina teo anelanelan'ny fetim-pirenena tamin'ny 16 febroary sy ny andro niorenan'ny fahaleovan-tena tamin'ny 11 martsa dia hosoratana ho boky miaraka amina penina loharano hitazonana ny maha-marina ny antontan-taratasy namboarina. Koa satria fankalazana zato taonan'ny fanjakana litoania ity taona ity, manan-danja manokana ny fanamafisana ny fahaleovan-tena. Handeha amin'ny hetsika sy foara marobe ihany koa ity boky ity ary tsy isalasalana fa hanome fahalianana bebe kokoa.
Nantsoin'i Moskoa ho “fihantsiana” ny fikarohana ny fiaramanidina Heathrow Aeroflot
United sy Mesa Airlines hanolotra serivisy tsy an-kijanona isan'andro eo anelanelan'i Houston sy Havana